Inona no Ataoko fa Tsy Voafehiko ny Hatezerako? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bambara Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goun Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Guinée-Bissau Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Nzema Oromo Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tiorka Tseky Tsonga Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Impiry ianao no tezitra?
Hoatran’ny ahoana ny hamafin’ny hatezeranao?
tsy voafehy mihitsy
Amin’iza ianao matetika no tezitra?
Dada na Neny
Hanampy anao ity lahatsoratra ity, raha tsy voafehinao ny hatezeranao. Andeha aloha hodinihintsika hoe nahoana no tsara ny tony foana rehefa misy mampahatezitra.
Ny fahasalamanao. Hoy ny Ohabolana 14:30: “Mamelombelona ny vatana ny fo tony.” Milaza kosa ny Journal of Medicine and Life fa “mety hiteraka aretim-po ny hatezerana.”
Ny namanao. Hoy ny Baiboly: “Aza minamana amin’ny olona mora tezitra, ary aza mifanerasera amin’ny olona mora misafoaka.” (Ohabolana 22:24) Raha mora tezitra àry ianao, dia aza gaga raha mihatakataka aminao ny olona. Hoy ilay tovovavy atao hoe Jasmine: “Ho very namana ianao, raha tsy mianatra mifehy ny hatezeranao.”
Ny lazanao. Hoy i Ethan, 17 taona: “Raha tsy mahafehy ny hatezeranao ianao, dia ho fantatry ny olona izany, ary hisy vokany amin’ny fiheverany anao.” Saintsaino àry hoe: ‘Olona tsy tia ady sa olona mora tezitra no tiako hahafantaran’ny olona ahy?’ Hoy ny Baiboly: “Ny olona tsy mora tezitra dia tena manana fahaiza-manavaka, fa mampiharihary ny hadalany kosa ny olona tsy manam-paharetana.”—Ohabolana 14:29.
Ihatakatahan’ny hafa ny olona mora tezitra
Diniho ireto andinin-teny ireto sy ny tenin’ny olona eo ambaniny, ary saintsaino ireo fanontaniana miaraka aminy.
Ohabolana 29:22: “Izay mora tezitra mampisy fifandirana, ary izay mora misafoaka dia be fahadisoana.”
“Tena tsy nahafehy ny hatezerako aho tamin’izaho folo taona mahery kely. Hoatr’izany koa ny havan’i Dada. Hoatran’ny hoe ao amin’ny ranay mihitsy ilay izy. Sarotra aminay ny mifehy hatezerana.”—Kerri.
Mora tezitra ve aho? Raha vitako ny miezaka hanana toetra tsara, nahoana moa no tsy ho vitako ny hifehy ny hatezerako?
Ohabolana 15:1: “Mampitony fahatezerana mafy ny valin-teny malefaka, fa ny teny maharary kosa mahatonga fahasosorana.”
“Mila mianatra mifehy ny fihetseham-ponao ianao. Ho afaka hifehy ny hatezeranao ianao, raha miezaka ny halemy fanahy sy hifantoka amin’ny lafy tsaran-javatra.”—Daryl.
Nahoana aho no mila mitandrina amin’izay mety ho fihetsiko voalohany, rehefa misy mampahatezitra ahy?
Ohabolana 26:20: “Maty ny afo rehefa tsy misy kitay.”
“Na tezitra aza ilay olona miresaka amiko, dia matetika no lasa tony izy rehefa tsara fanahy aminy aho. Voafehy ilay hatezerana avy eo, dia afaka miresaka tsara izahay.”—Jasmine.
Rehefa maninona ny teniko na ny fihetsiko no mety hoe vao mainka mampahatezitra ny hafa?
Ohabolana 22:3: “Malina izay mahatsinjo ny loza ka miafina, fa ny tanora fanahy kosa mbola miroso ihany ka voa.”
“Indraindray aho mila miala teo mihitsy aloha, dia misaintsaina an’ilay zava-nitranga. Afaka mandamina an’ilay izy aho avy eo rehefa tony tsara.”—Gary.
Rahoviana aho no tokony hiala rehefa misy zavatra mahatezitra, nefa tsy hoatran’ny hoe manao tsinontsinona an’ilay olona niresaka tamiko?
Jakoba 3:2: ‘Manao fahadisoana imbetsaka isika rehetra.’
“Tokony hanenina isika rehefa diso, nefa koa mila mandray lesona avy amin’ilay izy. Tsy tokony ho kivy isika raha namerina an’ilay fahadisoana, fa tokony ho tapa-kevitra ny hihatsara foana.”—Kerri.
Soso-kevitra: Manàna tanjona, ohatra hoe mba tsy hisafoaka mandritra ny fotoana kelikely, angamba iray volana. Soraty amin’ny karine ny fandrosoana vitanao.
“Nieritreritra aho taloha hoe kanosa ny olona rehefa mandefitra fa tsy manampatra ny hatezerany. Hay kay ilay izy porofon’ny fanetren-tena. Io no anisan’ny toetra tena tsara ananana. Tsy mora tamiko ny nianatra nifehy ny hatezerako, nefa nahasoa ahy ilay izy.”—Alyssa.
“Maka fotoana kely ifohana rivotra aho, fa tsy tonga dia manao zavatra. Manana fotoana hisaintsainana aho amin’izay, ka tsy manao zavatra mety hanenenako. Tsy vahaolana mihitsy ny hoe tezitra. Vao mainka izany mampitombo ny olana.”—Erik.
Nahoana tokoa moa no hoe ratsy ny miteny ratsy nefa ilay izy aza be mpanao?
Hizara Hizara Inona no Ataoko fa Tsy Voafehiko ny Hatezerako?
ijwyp no. 41